चुनाव र ‘निष्पक्ष सक्रियता’-Nagarikaawaj.com
चुनाव र ‘निष्पक्ष सक्रियता’
प्रसङ्ग सुरु गरौं ‘थाहा आन्दोलन’का प्रणेता रुपचन्द्र विष्टको भनाइबाट, ‘हामी कसैका होइनौं, कोही हाम्रा होइनन् । हामी सत्य र न्यायका, सत्य र न्याय हाम्रो ।’ रुपचन्द्र विष्टले आफ्नो जीवन कालमा जे गरे, जे बोले र जसरी आफ्नो जीवन गुजारे, शायद उनले जीवनभर ‘निष्पक्ष सक्रियता’को पूर्ण अभ्यास गरे । उनले बोलेनन् मात्र, बोलेका कुरा व्यवहारमै गरेर देखाए । उनी ठूला सिद्ध पुरुष तथा दार्शनिकहरु र खेतबारीमा काम गरिरहेका किसानहरुलाई बाहेक सबैलाई ‘त“’ ले सम्बोधन गर्थे रे । उनले कसैको पक्ष वा विपक्षमा लागेनन् । उनी पक्षमा लागे त केवल न्याय र सत्यको । उनी मानिसहरुमा विवेकको बत्ती बाल्दै ‘अथाह’लाई ‘थाहा’ मा बदल्ने चेष्टा गर्दै हिंडे । उनले आफ्नो जीवन नै त्यसैमा व्यतीत गरे । त्यसैले त उनी जनजनको हृदयमा अटाए ।
अहिले मुलुक संविधानसभाको चुनावमा होमिएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरु आआफ्नो पार्टी पंक्तिलाई जिताउनको लागि जनतास“ग मत मागिरहेका छन् । स्वभाविक हो, निर्वाचनको समयमा सबैले आफ्नो आफ्नो कुरा गर्ने नै भए । आगामी मंसीर ४ गते हुन लागेको संविधानसभाको निर्वाचनको संघारमा आइपुग्दा सबै नेता–कार्यकर्ताहरु पक्ष विपक्षमा बा“डिएका छन् । कतिपय ठाउ“हरुमा त एकले अर्काविरुद्ध अनर्गल प्रचारसमेत गरेको देखिएको छ । निश्चित रुपमा चुनाव हो, चुनावमा सबैले आफू र आफ्नो दललाई जिताउनको लागि मत माग्ने नै भए । तर, पनि आम रुपमा केवल मतदाता मात्र रहेका जनताले भने यस्तो बेलामा कसैको बहकाउमा लागेर भन्दा पनि रुपचन्द्र विष्टले भनेझैं आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेर सत्य र न्याय के हो त्यो छुट्टयाउनु पर्ने बेला भएको छ ।
पक्ष र विपक्षमा बा“डिएका नेता–कार्यकर्ताहरुले निश्चित रुपमा ‘निष्पक्ष सक्रियता’को अभ्यास गर्न सक्तैनन् । किनकि उनीहरु आफ्नो दलको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पर जान सक्तैनन् । तर पनि इतिहासमा त्यस्ता परिस्थितिहरु सृजना भएका छन् । जसले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दै पार्टीका नीति नियम र निर्देशनको उल्लंघन पनि गरेको छन्, फगत न्याय र सत्यको पक्षमा । हो, हामी अहिले संविधानसभाको निर्वाचनको करिबन संघारमा आइपुगेका छौं । कतिपय नेताहरुले विगतका गल्ती कमजोरीप्रति माफी माग्दै अब त्यस्तो गल्ती नगर्ने र आफू जनताकै लागि गर्ने र मर्ने सम्मका प्रतिबद्धताहरु पनि सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यद्यपि ती सबै मिठाईमा राखिने गुलियो ‘चास्नी’ मात्रै हो । मिठाइ खा“दा खास स्वाद मिठाइकै आउने हो, चास्नीको होइन । यदि हामी चास्नीतिरै भुल्यौं भने मिठाइको स्वाद अर्केले लम्काउन बेर लाउ“दैन ।
त्यसो भए, निष्पक्ष सक्रियताका आधारहरु के के हुन् ? भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । निश्चित रुपमा अन्तिम आधार भनेको सत्य र न्याय नै हो । सत्य र न्यायको पक्षमा लाग्नका लागि राजनीतिक एजेण्डा नै मुख्य आधारहरु हुन् । वर्तमानको धरातलीय यथार्थ, विगतका अभ्यास र अनुभवहरु र भविष्यप्रतिको स्पष्ट मार्गचित्रले नै सत्य र न्यायको पक्षमा लाग्ने आधारहरु तय गर्दछन् । अहिले चुनावी माहोल छ । मुलुकभर राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरु चुनावी दौडधुपमा छन् । सबै मतदाताका घरघरमा दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पुगेर मत मागिरहेका छन् । यसैले चुनावी माहोल सृजना गरिरहेको छ । तरपनि आम रुपमा मतदातामा केही अन्यौल देखिन्छ । आखिर सबै दलले भन्ने कुरा एउटै छ अहिले––संविधानको निर्माण गर्ने अनि विकास र समृद्धिको लहर फैलाउने । मुलुकलाई आर्थिक रुपले सम्पन्न गर्ने । मोटो रुपमा अहिलेको समकालीन नेपाली राजनीतिको एजेण्डा यिनै हुन् । यदि त्यसो हो भने सबैले त्यही कुरा गरेकै छ, जसलाई मत दिएपनि फरक पर्दैन रहेछ भन्ने भान पर्न सक्छ । तर, चुरो कुरो त्यसो होइन ।
चुनावी लहर सृजना गर्नका लागि सबैले भन्ने कुरा एउटै भएपनि विगतको संघर्ष र वर्तमान राजनीतिक परिदृष्यमा कसका एजेण्डाहरु स्थापित भएका छन् र त्यसलाई स्थापित गर्नका लागि कसले कति संघर्ष गरेको छ ? सत्य र न्यायलाई हेर्ने आधार त्यही हो । यसो भन्दा निश्चित रुपमा अहिलेको मुलुकको राजनीति एकीकृत माओवादीकै एजेण्डामा हिंडिरहेको छ । मुलुकको राजनीतिको मूलधारमा जति पनि युगान्तकारी परिवर्तनका एजेण्डाहरु छन् ती सबैको जननीकर्ता माओवादी नै हो । अहिले ती सबै एजेण्डाहरु मुलुकको संविधानमा संस्थागत हुने पर्खाइमा बसेका छन् । ती यस्ता एजेण्डाहरु हुन् जसले मुलुकलाई आमूल परिवर्तनको दिशातर्फ डो¥याउन सक्तछन् । जसका लागि सबैभन्दा पहिला ती एजेण्डाहरुलाई राज्यको मूल कानून र अन्य ऐन कानूनहरुमा दर्ज गरिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र ती एजेण्डा आम जनताको पक्षमा कार्यान्वयिन्त हुन्छन् । अनि ती एजेण्डामा आम जनताको प्रगति र समृद्धिका एजेण्डामा कसले खरो उत्रिएर कार्यान्वयन गर्छ भन्दा जसले त्यसको सृष्टि गरेको हो, अथवा जो ती एजेण्डाहरुको सुत्राधार हो उसैले त्यसको सक्रियतापूर्वका कार्यान्वयन गर्न सक्छ । हो, अहिले आम मतदाताले बुझ्नुपर्ने चुरो कुरो यहि हो ।
त्यसो त अहिले मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरुबीच एकखालको पेचिलो संघर्ष जारी रहेको छ । खासगरी काठमाण्डूकेन्द्रित शासकीय मानसिकताको अन्त्य गर्दै तलैसम्म शासकीय शक्तिको विकेन्द्रकरण गर्ने र ‘पिंध’मा रहेका शोषित, पीडित र वर्षौंदेखि केन्द्रीय राज्यसत्ताबाट पछि पारिएका आम नागरिकहरुलाई सशक्तिकरण गर्ने कि वर्षौंदेखि लुटको वर्चस्व जमाएर बसेका कुलीन तथा अभिजात वर्गहरुमा अन्तरनिहित सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने भन्ने संघर्ष मूल संघर्ष हो । यसमा केही पुराना पञ्च पार्टीहरु सामान्य खालको विकेन्द्रीकरण गरेर मुलुकको सत्ता र शक्तिमा फेरबदल ल्याउनु हु“दैन भन्ने मतमा छन् । उनीहरु कतिले पछिल्लो समयमा गणतन्त्र र संघीयतालाई स्वीकार गरेको जस्तो देखिए पनि उनीहरुको राजनीतिक दर्शन, विचार र सिद्धान्तले मुलुकलाई सा“च्चिकै संघीय राज्यको रुपमा तलैसम्म अधिकार प्रत्योजन गर्न दिंदैन । त्यसैले उनीहरुको भित्री इच्छा भनेको काठमाडौं केन्द्रित सत्ता र शक्तिलाई दूरदराजसम्म पु¥याउने हुनै सक्तैन ।
अब अलिकति नेकपा एमाले, कांग्रेस, मधेशवादीलगायतका केही दलहरुको कुरा गरौं । यिनीहरु मध्ये नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलगायतका केही साना दलहरुले सिद्धान्ततः परिवर्तन र समृद्धिका मुद्दालाई स्वीकार गरेका त छन्, तर उनीहरुले त्यसलाई तल्लो तहको जनतासम्म पु¥याउने हदसम्म राजनीतिमा आमूल परिवर्तन चाह“दैनन् । खासगरी केन्द्रीय शासनसत्तामा यो वा त्यो रुपमा धेरै समय पौठेजोरी खेल्दै आएका यी शक्तिहरु पूर्णतया परिवर्तनको विरोध गर्न त सक्तैनन् तर, विद्यमान शासकीय स्वरुप र राजकीय सत्ताको स्वरुप नै बदलिने गरी मुलुकको रुपान्तरण गर्न पनि चाह“दैनन् । सिद्धान्त र उनीहरुको रुप पक्ष जेजस्तो भएपनि सार पक्षमा उनीहरु २०४७ सालकै वरिपरी रहेर केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो र आफू निकटको केही अभिजात वर्गको भूमिका रहिरहोस् भन्ने चाहन्छन् । यसर्थ उनीहरुले आम रुपमा जनताको निकै तल्लो तहसम्म अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्तैन । त्यो किनपनि भने विगतको संसदीय राजनीतिक अभ्यासमा जति यिनीहरुले शक्तिको उपयोग गरेर कमाएका छन्, यदि अहिले भनिएजसरी मुलुकको आमूल परिवर्तन भएमा उनीहरुलाई नै सबैभन्दा बढी धक्क लाग्नेछ र उनीहरुले नै धेरै गुमाउनुपर्ने छ ।
किनकि हिंजो उनीहरुको चरित्र भनेको यतापनि ठिक्क र उतापनि ठिक्क थियो । लघुस्मृतिका कारण उनीहरुको विगत छोपिएको भएतापनि त्यो फाटेको टालोले लाज छोपेजस्तै हो, अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जाने हो भने त्यो पूर्णतया उदाङ्गो हुन्छ । यसमा परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने दलहरुमा बरु भर्खरै निर्माण भएका केही क्षेत्रीय दलहरु र केही मधेशवादी दलहरु अग्रगामी देखिन्छन् । तथापि उनीहरुस“ग समग्र मुलुकको आमूल परिवर्तनका लागि आफैंले निर्माण गरेको एजेण्डाहरु छैनन् । उनीहरुले गरेको परिवर्तन र रुपान्तरणका कुरा फगत एउटा समुदाय र क्षेत्रीय हैसियतमै विद्यमान हु“दा तिनले समग्र मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणको नेतृत्व लिनसक्ने हैसियतमा छैनन् । उनीहरु आफैंले नेतृत् वगर्ने हैसियतमा छैनन् । यद्यपि उनीहरुस“ग पनि गुमाउनुपर्ने धेरै कुरा नहु“दा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेसवालमा असल सहयात्री बन्न सक्छन् ।
यसरी हेर्दा परिवर्तन र समृद्धिका एजेण्डा पनि भएको र त्यसलाई दरोस“ग कार्यान्वयन गर्ने हैसियत पनि निर्माण गर्न सक्ने र त्यस अनुरुपको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई ठीक आंकलन गरेर मुलुकको अग्रगामी रुपान्तरणका लागि नेतृत्व प्रदान गर्ने पार्टी भनेको अहिलेसम्म एकीकृत नेकपा माओवादी नै देखिन्छ । यसर्थ, यदि परिवर्तन र समृद्धि चाहने हो भने माओवादीको विकल्प छैन । माओवादीलाई पछिल्ला समयमा निर्माण भएका परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने क्षेत्रीय दलहरुले दरिलो साथ दिनुपर्छ । यस मानेमा आम मतदाताले अब निष्पक्ष सक्रियता देखाउनुपर्छ । निर्वाचनमा परिर्वतनलाई संस्थागत गर्न सक्ने र परिवर्तनको एजेण्डालाई नेपालको समकालीन राजनीतिमा जर्बजस्त रुपमा स्थापित गरेको शक्तिको पहिचान गरी त्यसलाई मत दिनुपर्छ, तबमात्र अहिले मूल धारमा रहेको राजनीतिक एजेण्डाहरुले सहि स्पेश पाउ“छन् । किनकि गएको संविधानसभामा शक्ति सन्तुलनको जटिलताका कारण त्यसले चाहेजसरी काम हुन नसकेको यथार्थ हो । आखिर संविधानसभाको विघटनकै परिदृष्यहरुलाई एकपटक मानसपटलमा उतार्ने हो भने त्यही निर्णयबिहिनताको गोलचक्कर देखापर्छ । त्यसकारण कम्तीमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरुलाई दुईतिहाई मत पुग्नेगरी जिताउनु जरुरी देखिन्छ । जनताले एजेण्डा हेरेर, सत्य र न्यायको पक्षमा अब निष्पक्ष सक्रियता देखाउने बेला भइसकेको छ ।